အစားရွေးတဲ့ သားသားမီးမီး... အစားစားစေဖို့ - Hello Sayarwon
အစားရွေးတဲ့ သားသားမီးမီး... အစားစားစေဖို့
ကလေးက ပြင်ဆင်ပေးသမျှကို အားပါးတရစားတာကို မြင်ရချိန်က မေမေတစ်ယောက်အတွက် အပျော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာက လွယ်ကူလှတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံချင်းမတူကြလို့ပါ။ အချို့ကလေးတွေက အစားမရွေးတတ်ပေမယ့် အချို့ကလေးတွေကတော့ အစားရွေးတတ်ကြပါတယ်။ အစားရွေးတဲ့ သားသားမီးမီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မေမေတို့ရေ…….
သားသားမီးမီးက အစားရွေးသူလား …….
ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးက ဟိုဟာကျွေးလည်း မစားချင်ဘူး၊ ဒီဟာဆိုလည်း ဟင့်အင်းလုပ်မယ်။ အာဟာရပြည့်တဲ့ ထမင်းတွေ။ ဟင်းတွေထက် အာဟာရပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အချိုစာတွေ ကိတ်မုန့်၊ ရေခဲမုန့်စတာတွေကိုမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတာက အစားရွေးတဲ့ သားသားမီးမီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုတာပါ။
အစာရွေးတော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ…..
အစာရွေးတော့ သေချာတာက လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေ ပြည့်ဝစွာမရဘူးပေါ့။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရှိန်ယူနေရချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရကို ပြည့်ပြည့်ဝဝမရတော့
သင်ယူနိုင်စွမ်း အားနည်းမယ် စတဲ့ ပြဿနာတွေခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
အစာရွေးတဲ့ သားသားမီးမီး အစားစားစေဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ….
အစာရွေးတဲ့ သားသားမီးမီးကို အစားစားစေဖို့ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက အဆင်ပြေစေမှာပါ။
(၁) ကလေး မဆာတာကို အတင်းမကျွေးပါနဲ့
အစားအသောက်က ဆာတဲ့အချိန်။ စားချင်စိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ စားတာက အရသာအရှိဆုံးပါ။ ကလေးတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ မစားချင်တာကို စားရတဲ့အခါ နောက်တစ်ကြိမ် ဒီအစားအစာကို ထပ်မစားချင်တာမျိုး၊ အစား စားချင်စိတ်မရှိတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးက မဆာတာကို အတင်းစားခိုင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ အစားစားဖို့ ဖိအားမပေးမိပါစေနဲ့။
(၂) ကုန်နိုင်သလောက်ပဲ စားခိုင်းပါ
ကလေးကို ထမင်းစားတဲ့အခါ အများကြီး အားရပါးရ စားစေချင်တာက မေမေ့ရဲ့ ဆန္ဒဆိုပေမယ့် ကလေးကုန်နိုင်တာထက် အများကြီးကျွေးတာက ကလေးကို အစားရွေးတဲ့ကလေးဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင် တွန်းပို့မိသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ကုန်နိုင်သလောက် နည်းနည်းချင်းပဲ ထည့်ကျွေးပေးပါ။
(၃) စားချင်စရာ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါ
ကလေးတွေက လှလှပပ ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို အသီးအရွက်ကစလို့ အသား၊ငါး။ ဥအမျိုးမျိုးအထိ စားစရာတိုင်းကို စားချင်စဖွယ်ပြင်ဆင်ပေးပါ။
(၄) မိသားစု ထမင်းဝိုင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးပါ
ကလေးကလည်း မိသားစုတွေနဲ့ ထမင်းစားချင်မှာပါ။ ဒါကလည်း ကလးကို အစားစားချင်စိတ်ဖြစ်စေပြီး အစားရွေးတဲ့ ကလေးမဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာ အတူတူစားခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
ကလေးက မသိသေးတဲ့အရသာကို စမ်းစားခိုင်းတဲ့အခါ နည်းနည်းလောက်တော့ အင်တင်တင်လုပ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို မိဘတွေဘက်က စိတ်ရှည်ရှည်ထားပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒါမှ ကလေးက အစားမရွေးဘဲ အားပါးတရ စားသုံးတတ်သူလေး ဖြစ်လာမှာပါ။
(၆) အတူတူ ပြင်ဆင်ပါ
အစားအစာတွေကို အတူတူ ပါဝင်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးတာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ရေကူဆေးခိုင်းတာမျိုး၊ ဟင်းမြည်းခိုင်းတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက ကလေးကို အစားစားချင်စိတ်ဖြစ်လာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ကိုယ်နဲ့ အတူတူ ပါဝင်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
(၇) အပြောင်းအလဲ လုပ်ပေးပါ
လူကြီးတွေတောင်နေ့တိုင်း ဟင်းတစ်မျိုးတည်းကို မစားနိုင်တာ ကလေး​တွေလည်း အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးကို ဟင်းအမည်လေးတွေ အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးပါ။
(၈) အတူတူ ဈေးဝယ်ထွက်ပါ
ကလေးနဲ့အတူတူ ဟင်းချက်စရာတွေကို ဝယ်ယူပါ။ ကလေးကို အသီးအရွက်တွေရွေးခွင့်ပေးတာ၊ စားချင်တဲ့ အသီးရွက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို မေးပြီး ဝယ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပါ။ ဈေးဝယ်တာကအစ ဟင်းချက်တာအထိ ကူညီခွင့်ပေးလိုက်တာက ကလေးကို အစားစားချင်စိတ်ဖြစ်လာစေဖို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
(၉) ထမင်းစားချိန်ကို ပျော်စရာအချိန်လေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးပါ
ထမင်းစားချိန်ပျော်အောင်လုပ်ပေးတာကလည်း ​ကလေးကို အစားစားချင်စိတ်တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစုအားလုံး ထမင်းဝိုင်းမှာပျော်ပျော်ပါးပါး လက်ဆုံစားတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကို မွေးမြူပေးပါ။ ထမင်းစားချိန်ကို ပျော်ရွှင်စေတာကလည်း ကလေးကို အစားရွေးဖို့ မေ့သွားစေမှာပါ။
(၁၀) အားရပါးရ စားပြပါ
ကလေးရဲ့ စံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက မေမေ နဲ့ ဖေဖေပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်က ကလေးရှေ့မှာ အစားမရွေးပါနဲ့။ ထမင်းစားတဲ့အခါ အားရပါးရ စားပြပေးပါ။ ဒါကလည်း ကလေးအစားမရွေးအောင် အထောက်အကူပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
Children’s nutrition: 10 tips for picky eaters https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/childrens-health/art-20044948 Accessed Date 28 January 2020
16 Helpful Tips for Picky Eaters https://www.healthline.com/nutrition/tips-for-picky-eaters Accessed Date 28 January 2020
5 Tips to Handle Your Picky Eater https://health.clevelandclinic.org/5-tips-to-handle-your-picky-eater/ Accessed Date 28 January 2020
10 Tips for Parents of Picky Eaters https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/nutrition/Pages/Picky-Eaters.aspx Accessed Date 28 January 2020